भावी मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई बाँकेमा भ्याइ नभ्याई – Radio Hatemalo FM
प्रकाशित मितिः २३ माघ २०७४, मंगलवार ०१:१० February 6, 2018 हातेमालो संवाददाता
नेपालगन्ज।नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवम् प्रदेश नं.५ मा भावी मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई सोमवार बाँकेमा कार्यक्रम उद्घाटन र समापनमा भ्याइन भ्याई भयो।
नेपालगन्जमा सञ्चालन भएको प्रादेशिक महोत्सवको समापन समारोहलाई सम्वोधन गर्ने मुख्य कार्यक्रम बनाएर आईतवार साँझ नेपालगन्ज पुग्नुभएका एमाले नेता पोख्रेल हिजो दिनभर बाँकेमा व्यस्त रहनुभयो ।
एमाले नेता एवम् प्रदेश नं. ५ का भावी मुख्यमन्त्री पोख्रेलले सोमवार विहान कोहलपुरमा कोहलपुर नगरपालिकाको कार्यालय भवन उद्घाटन गर्नुभयो। बाम गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित पोख्रेलले कोहलपुरको विकास देखेर आफू खुसी भएको बताउँदै समृद्धिका लागि अब सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावतले कोहलपुरको विकासका लागि आएका सुझाव अनुसारनै गृहकार्य गर्ने भन्दै कोहलपुरको सपना समृद्धि र विकास नै रहेको बताए।
त्यसलगत्तै नेपालगन्जमा प्रेस चौतारी नेपाल बाँकेले आयोजना गरेको स्थापना दिवस कार्यक्रममा सहभागि भएर प्रदेश नं. ५ लाई समृद्ध बनाउन पत्रकारको साथको अपेक्षा गर्नुभयोे ।
हिजोनै नेता पोख्रेलले बाँके राजधानी संघर्ष समितिसँग पनि नेपालगन्जमा छलफल गर्नुभएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक निरक गुरुंग र सह–संयोजक ललित रौनियारले पोख्रेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेता पोख्रेलले राजधानी र प्रदेशको नामका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले उचित निणर्य गर्ने बताउनुभयो ।
नेपालगन्जमा माघ ११ देखि सञ्चालन भएको प्रादेशिक महोत्सवको सोमवार एमाले नेता एवम् भावी मुख्यमन्त्री पोख्रेलले समापन गर्नुभएको छ ।
पोख्रेलले नेपालगन्ज आर्थिक क्षेत्रको हव बन्ने कुरालाई कसैले छेक्न नसक्ने बताए । उनले प्रदेशको राजधानीका सवालमा थुप्रै बहस र छलफल भएको भए पनि एउटा ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बन्दैमा अन्य ठाउँमा विकास नरोकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
खजुरामा सञ्चालित सुशील कोईराला क्यान्सर अस्पताल अवलोकन गर्ने कार्यक्रम समयअभावमा स्थगित भएको छ । अस्पताल अवलोकनका लागि अस्पताल अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले अनुरोध गरेको भए पनि समयअभावका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको हो ।
सोमवार विहानैदेखि बाँकेमा व्यस्त रहनुभएका नेता पोख्रेलले साँझ एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । पौडेल हिजो साँझ काठमाडौबाट नेपालगन्ज आईपुग्नुभएको हो ।
दुवै नेताले सोमवार रातीको खाना र कार्यकर्ता भेटघाट एमाले बाँकेका नेता घननाथ खनालको ढकेरीस्थित होटलमा गर्नुभएको छन् । सोमवार राती नेपालगन्जस्थित किचन हटमा बास बसेर आज विहानै दुवै नेता दाङ जाने कार्यक्रम रहेको एमाले बाँकेका प्रचार विभाग प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले जानकारी दिनुभएको छ ।
सकियो प्रादेशिक महोत्सव